Usoro na ọnọdụ | Law & More BV
Law & More na Hague, (nke dị n'okpuru ebe a “Law & More”) Bụ ụlọ ọrụ nke aka ya nke nwere obere ọrụ ejikọtara n'okpuru iwu Dutch, na ebumnuche nke itinye ọrụ iwu. Law & More bu onye otu ndi oka iwu nke LCS.
Ọnọdụ ọnọdụ ndị a niile na-emetụta iwu niile nke onye ahịa ọ gwụla ma tupu nkwenye nke nkwekọrịta ekwenye na ederede. Itinye aha izugbe ncheta ihe ma obu onodu ozo nke onye ahia ka apu iche.
Anakwere ma nye iwu gị niile Law & More. Enweghi ike itinye akwụkwọ edemede 7: 407 paragraf nke 2 nke Dutch Civil Code.
Law & More na-arụ ọrụ dị ka usoro iwu nke Dutch Bar Association na ịrụ, dị ka iwu nke nzuzo nke onye ahịa si dị n'okpuru ozi nkwekọrịta enwetara.
.Gba ume Law & More ahụkwala n'ụtụ ụtụ isi nke omume ọ bụla ma ọ bụ zufuo ọ bụla, ọ gwụla ma onye ahịa enyere ya ozi ọdee ede Law & More. Ọ bụrụ na n’ihe banyere mkpa iji gbanye ya Law & More ọrụ enyere ndị ọzọ, Law & More ga-atụle tupu gị na onye ahịa ya. Law & More ọ bụghị maka ịnabata ụdị ọ bụla nke ndị ọzọ a ma nwee ikike, na-enwebeghị oge tupu ha atụlee ya na aha onye ahịa ọ bụla amachibido iwu ịkwụ ụgwọ nke ndị ọzọ etinye aka na ya.
Ibu ọrụ ọ bụla nke Law & More enwere oke na ego ahụ, n'ọnọdụ nke ọ bụla a ga-akwụ ụgwọ site n'aka onye ọrụ ụgwọ ọrụ kwụrụ ụgwọ yana ego nke mkpuchi dị mkpa n'okpuru ego a na-akwado. Ọ bụrụ na, maka ihe ọ bụla, anaghị enye ụgwọ ọrụ ọ bụla n'okpuru mkpuchi mkpuchi ndị ọkachamara, ụgwọ a kpọtụrụ aha na mbụ bụ naanị 5,000 XNUMX, -. Mgbe ajụrụ banyere (mkpuchi n'okpuru) site Law & More inshiogi inwere oru nke enyere oru aka. Onye ahia Law & More gosipụta nkwupụta nke ndị ọzọ na-ekwu maka ọrụ metụtara ọrụ a.
N'ihi na mmezu nke nkwekọrịta bụ ahịa iji Law & More kwụọ ụgwọ (gbakwunyere VAT). A na-agbakọ ụgwọ ahụ dabere na ọnụ ọgụgụ awa ọ rụrụ ọrụ na ọnụego elekere oge ọdabara. Nkwupụta nke Law & More site na ozi-e ma ọ bụ zite ya na ozi oge niile nye onye ahịa ya, a ga-akwụrịrị ya n’ime ụbọchị iri na anọ mgbe ụgwọ akwụkwọ ozi kwụrụ.
N'ime oge a, onye ahịa ahụ nọ na ndabara ma nwekwaa ọmụrụ nwa 1% kwa ọnwa. Enwere ike itinye ọrụ a rụrụ n'oge ọ bụla Law & More boro ebubo. Law & More kwesiri onye ahia ya ka onye choo ugwo nkwalite ya.
A ga-etinyerịrị akwụkwọ maka akwụkwọ ọnụahịa ahụ n ’akwụkwọ nkwupụta n’ime ụbọchị iri na anọ mgbe akwụkwọ ọnụma akwụkwọ ahụ mechara Law & More, ida nke a na-anabata nkwupụta ikpeazụ na-enweghị ngagharị iwe.
Mmekọrịta iwu dị n'etiti onye ahịa na Law & More nọ n'okpuru iwu Dutch.
Lọ ikpe ruru eru na Hague ga-ekpebi esemokwu niile sitere na mmekọrịta iwu a.
Azọrọ niile nke nwere ike ịkpọku onye ahịa ya megide Law & More, ga-agwụ n'ọnọdụ ọ bụla otu afọ mgbe ụbọchị nke ọre ahịa matara ma ọ bụ nwee ike ịmara na ịdị adị nke ikike ndị a.